Ninkii naag la qabo damaaciyay (Sheeko Murtiyeed) - iftineducation.com
aadan21 / December 26, 2011
Waxa la yidhi, nin baa naag wanaagsan qabay. Maalin maalmaha ka mid ah baa nin kale naagtiisii u yimi, markasuu arkay inay aad u qurux badantahay. Ninkiibaa wuxuu damcay inuu ninka naagta kala baxooo guursado. Kolkaasuu naagtii ku yidhi, “Naa, ninkaagu waa nacase aan ku guursado?”
Markaasay nagtii tidhi, ” Ninkayga nin aan ku doorsanayaa ma jiro’e malaha qoyskiina oo qoyskooda ka fara badan baad ugu faanaysaa!” Ku ye ” Mayee anaa kaa og oo ninkaagu waa fule.” Markaasay tidhi, “Hadalkaasi mid aan kaa maqlayo ma ahee, hadal kale ma haysaa?”.
Wuxuu yidhi, “Adigu bal I raac hadalkaygu inuu been yahay iyo in kale aad aragtide, elleen haduu ninkaagu nin rag ah yahay ficilkiisay ka muuqan doontaaye.
Markaasay ku tidhi, “Waar ku raaci maayee hadaad raganimadiisa tijaabinayso aqalka dabadiisa kula shax oo hadal dahsoon kula hadal bal inuu garto”. Markaasuu yidhi, “Waayahaye berri baan la shaxi doonaa”. Iyadiina ninkeedii waxba umay sheegin.
Malintii dambuu soo noqday ninkii guriga lahaa oo jooga, markaasuu yidhi, “Waar hebelow, soo kac aan aqalka dabadiisa ku shaxno’e”. Aqalka dabadiisii bay shaxdii ka jeexdeen naagtiina way dhagaysanaysaa.
” Geenyada inaan toociyaa ila gudboonayde”
sidii guluf wax weeraray cidlaan gelelafaayaaye”
“Geenyada nin lihi qoofashee qololka daaqaysa
qiyaasli’i ninkii qaadayow qoomamaa xigiye”
“Qunbe malaba oo meel qotoma oo rag wada quuto
miyaad qoonsanaysaa hadii gaajo noo qabatay”
“Qunba malaboo meel qotoma oon cidi qadhiidhaynin
qooraansigiisaa ka daran quud aan la cunayne”
“Nin adoogii toban qaalin dhalay qolona kuu sheegtay
miyaad qoonsanaysaa haduu gabadha kaa qaado”
“Nin adoogii qudh kaliya dhalay qiimmina u jooga
Miyaad qoonsaysaa haduu rubadda kaa qaado”
Bakhaylkii Xeeladda Yiqiinay ( SHEEKO ILLA QOSOL AH)